TV Stand Factory - China TV Stand Abakhiqizi, abahlinzeki
I-YF-H-906 Smart Round Coffee Table + TV stand ne-Rotatable Drawers e-White & oki
Nikeza isikhala sakho umfutho wesitayela sesimanje nobuhle ngale sethi yetafula lekhofi elingu-2.
Idizayini evelele enokuthinta kwesikhalazo sesimanjemanje, lestandi esiyingqayizivele se-TV netafula lekhofi kuzoba inketho enhle yegumbi lakho lokuzijabulisa
Itafula le-YF-H-903 multifunction cofee + netafula lokulinganisa
Idizayini evelele enokuthinta kwesikhalazo sesimanje, lesi sitendi se-TV esinwebekayo esiyingqayizivele sizoba inketho enhle yegumbi lakho lokuzijabulisa. Uma ufaka umklamo osebenzayo onwebekayo, ungalungisa ubude bawo ngokuya ngezidingo zakho futhi ucezu olwandisiwe lunikeza indawo eyengeziwe yokubonisa izincwadi zakho, isithombe somndeni, imihlobiso, nokuningi.
I-YF-H-901 TV Stand 3-Drawer Media Stand enefreyimu yegolide ne-Glass ephezulu
Uma ufuna isiqeshana sesici se-jazz ngempela isikhala sakho sokuhlala manje-ke nakhu! Kuyinto enhle kakhulu futhi yesimanje, iqinisekile ukuthatha isigaba sokuqala egumbini lakho lokuphumula.Umhlophe omusha ulungele ukudala umoya onokuthula. Imibala yonke ikhombisa kahle ukuthi isiphelile amayunithi 'aqine kakhulu futhi.
Amasethi egumbi lokuhlala lesikhumba i-YF-H-907
Iphethini yolayini weJiyomethri ihlangana netafula elibushelelezi, likwenza kube kuhle kumndeni wanamuhla.
Isitendi se-YF-H-905 TV esinamadrowa neminyango ngegolide
Noma ngabe usanda kuthuthela endlini entsha noma uthathe isinqumo sokuphinda uhlobise futhi udinga isitendi esisha se-TV ukuze uhambe negumbi lakho, kunezindlela eziningi ongakhetha kuzo.
YF-H-904 White kukanxande Isitoreji Ikhofi Ithebula + TV ukuma
I-Luxury Yesimanje: Idizayini ebushelelezi enesiphetho segolide esikhazimulayo inezela ukuthinta okukhanyayo kunoma yisiphi isikhala, esilungele ukusisebenzisela ukuzungeza ukubukeka kwesimanje kwetafula.Ithebula lekhofi lizokwengeza ukubukeka okukhanyayo nokwesimanje kunoma iliphi igumbi ekhaya elinobushelelezi balo, ukuphela okukhazimulayo okumhlophe.
Ama-TV wegolide we-YF-H-900 kanokusho
I-Stand Modern Gold Mirrored Media Console ene-6-Drawer & Glass Top Made ye-MDF, ingilazi emnene nensimbi engagqwali ukuqinisekisa ukusetshenziswa okuhlala isikhathi eside.
Isiphetho se-YF-H-700 esicwebezelayo nesitayela se-tv esihlanzekile
Iyunithi yesimanje yodonga lwe-TV enezingqimba eziphezulu ze-MDF ezimhlophe
I-TV Stand enhle enikezela ngemishini yokugcina ephezulu ezokwamukela isikrini sakho futhi ingene kahle kunoma iliphi igumbi.